Ndị ọrụ Kpesa ọdịda GPU na New MacBook Pro | Esi m mac
Ndị ọrụ na-akọ GPU ọdịda na New MacBook Pro ha
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ngwaahịa ndị a na-ere kwa ụbọchị, ngwaahịa Apple anọghị n'azụ ọdịda ndị nwere ike ịdapụta na imepụta oke. Anyị ahụla nsogbu na ihuenyo nke iPhone 6s Plus ma ọ bụ ọdịda na ụfọdụ batrị nke ụfọdụ laptọọpụ nke ika mana ihe na-adọta ọtụtụ uche ugbu a chinchi metụtara kọmputa ohuru na akara udara apụl erere, 2016 MacBook Pro.
Dika otutu nde ndi oru nke zutara laptọ́ọ̀pụ̀ ohuru ndị a na anata ha n’ụlọ ha, ha ebido ịkọ akụkọ ọdịda nke ndị nwe ha na nke a ha nwere ike ịbụ ngwaike na ngwanrọ.
Onye mbụ jide ọhụrụ 2016 MacBook Uru nwere kọọrọ nsogbu na ọhụrụ ha na gigantic Trackpad na o yiri ka mmegharị aka na mkpịsị aka abụọ na atọ amataghị nabata na n'ihi ọdịda na ya ojiji na-atụle.
Ugbu a, anyị hụrụ na site na blọọgụ America nke 9to5Mac, ọtụtụ okwu na-apụta nke ndị ọrụ zutere nchinchi nke gosipụtara onwe ha na ntanetị kọmputa ha n'ụdị oji na uhie na oghere ma ọ bụ njikwa na-enweghị nkọwa na-enweghị nkọwa nke otu.
Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ndị 15-anụ ọhịa MacBook Pro na-ata ahụhụ site na nsogbu ndị a nke nwere ike na-metụtara GPU ọdịda nke jikọtara ọnụ. Thatbụ na ọ nwere ike, ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na ụdị ụfọdụ nke nsogbu na ọhụrụ gị MacBook Pro, ị kwesịrị ị na-agakwuru ihe Apple Store ma ọ bụ ihe ikike oru ọrụ ozugbo enwere ike nke mere na ị na-enye akụkụ nke otu ihe ngwa ngwa o kwere omume na ụlọ ọrụ nke bitten apụl.
Nke a na ụdị ngwaike ọdịda bụ nkịtị na nnukwu agbaba nke nkeji nke a ngwaahịa na ọ bụ na n'agbanyeghị na Apple nwere a nlezianya àgwà usoro ugbu na ya na ngwaahịa na ya n'ichepụta usoro, enwere ngalaba mgbe niile iji jikwaa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook Pro » Ndị ọrụ na-akọ GPU ọdịda na New MacBook Pro ha
Mara ngwaọrụ nke ejiri igwe ojii gị iCloud nweta